गगन थापाको प्रश्न : हामीलाई हेप्ने ? विधेयकमा कहाँ बसेर छलफल गर्ने हो ? – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ पुष २४, बिहीबार १९:०१ [post-views]
कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले बिहीबार विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले काम गरेर मुख बन्द गर्ने आँट नभएपछि विधेयक ल्याएर तर्साउन खोजिएको दाबी गरे।
यो पनि पढ्नुहोस् : नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ
“माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएछ- विधेयक नपढीकन आयो । यो विधेयकमा कहाँ छलफल गर्ने मन्त्रीजी ? सिंहदरबारमा गर्ने हो ?
संसदमा गर्ने हो ? माइतीघरमा गर्ने हो कि तिम्रो कार्यालय धुम्बाराहीमा गर्ने हो ?,” मन्त्री बास्कोटालाई छलफलका लागि चुनौती दिँदै उनले भने, “प्रत्येक दफादफा-शब्दशब्दमा छलफल गर्न तयार छु । नपढीकन आएको होइन । पढेर बुझेर आएको हुँ । हेप्ने हाम्लाई नपढीकन आयो भन्ने ? हामीले बुझेर आएको हो । पढेर आएको हो ?”
प्रधानमन्त्री ओलीको शीरमा नभइ मष्तिस्कमा श्रीपेच छ : प्रदिप पौडेल
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लामिछानेको निधन